I-Biography ye-Explorer uRobert Cavelier de la Salle
URobert Cavelier de la Salle wayengumhloli waseFransi obizwa ngokuba yiLouanaana kunye ne-Mississippi River Basin eFransi. Ukongeza, wahlola ubuninzi belizwe laseMelika e-Midwest, izabelo zaseMpuma Canada kunye neeLwandle eziLwandle .
Ubomi bokuqala kunye nomsebenzi wokuqala weLa Salle
ULa Salle wazalelwa eRuen, eNormandy (eFransi) ngoNovemba 22, 1643. Ngethuba lokukhula kwakhe, wayeyilungu lenkolo yamaYuda.
Wenza ngokusemthethweni izithembiso zakhe ngo-1660 kodwa ngoMatshi 27, 1667, wakhululwa ngesicelo sakhe.
Kungekudala emva kokukhululwa kwakhe kwi-Jesuit, uLa salle washiya iFransi waza waya eCanada. Wafika ngo-1667 waza wahlala eNew France apho umzalwana wakhe uJean wayefudlulile kunyaka. Ekufikeni kwakhe, uLa salle wanikwa isiqwenga somhlaba kwisiqithi saseMontreal. Waqamba igama lakhe uLakine. Kukholelwa ukuba wakhetha eli gama kwilizwe ngenxa yokuba ukuguqulelwa kwesiNgesi kuthetha iChina kwaye ngexesha elide lobomi bakhe, uLalle unomdla wokufumana indlela eya eChina.
Kuyo yonke iminyaka yakhe yaseCanada, uLa salle wakhipha izibonelelo zomhlaba eLachine, wamisa ilali, waza wazama ukufunda ulwimi lwabantu abahlala kuloo ndawo. Ngokukhawuleza wafunda ukuthetha no-Iroquois owayemxelela ngomlambo wase-Ohio owawuwela eMississippi. I-Salle ikholelwa ukuba i-Mississippi yayiza kuphuma kwiGulf of California kunye nalapho iyakwazi ukufumana indlela yasentshona eya eChina.
Emva kokufumana imvume evela kwiRhuluneli yaseNew France, uLa salle wathengisa iimfuno zakhe eLachine waza waqalisa ukulungiselela uhambo lwakhe lokuqala.
I-Expedition yokuqala ne-Fort Frontenac
Uhambo lokuqala lokuqala lweLa Salle lwaqala ngo-1669. Ngelo xesha, wadibana noLouis Joliet noJacques Marquette, amadoda amhlophe okuqala ukuba ahlolisise kwaye aphuphe uMlambo waseMississippi, eHamilton, e-Ontario.
Uhambo lwaqhubeka ukusuka apho kwaye ekugqibeleni lwafika kuMlambo waseOhio, olwalandela emva kweLouisville, eKentucky.
Ekubuyeni kwakhe eCanada, iLa Salle yayijongene nokwakhiwa kweFort Frontenac (ekhoyo namhlanje e-Kingston, e-Ontario) eyayijoliswe ukuba ibe yesikhululo sokuthengiswa koburhweba obusakhulayo kuloo ndawo. Inqaba yagqitywa ngowe-1673 kwaye yathiwa nguLouis de Baude Frontenac, iGrisi Jikelele we-New France. Ngomnyaka we-1674, uLa salle wabuyela eFransi ukufumana inkxaso yebukhosi kwiimangalo zakhe zomhlaba e-Fort Frontenac. Wafezekisa le nkxaso kwaye wayenesibonelelo sokuhweba ubumnini, imvume yokuseka izixhobo ezongezelelweyo emngceleni, kunye nesihloko sobukhosi. Ngempumelelo yakhe entsha, uLa salle wabuyela eCanada waza wakha kabusha i Fort Fortenac ngamatye.
I sibini Expedition
Ngo-Agasti 7, 1679 iLa Salle kunye nomhloli waseNtaliyane uHenri de Tonti bahamba ngomkhumbi kwiLe Griffon, iinqanawa zokuqala zokuhamba ngomkhumbi ukuya kwiiLwandle eziLwandle. Uhambo lwaqala e-Fort Conti emlonyeni wesiNayile saseNiagara kunye neLake Ontario. Ngaphambi kokuqala kohambo, nangona kunjalo, abasebenzi bakaLa Salle babefanele bazise izinto ezivela kwiFort Frontenac. Ukuze kuphephe i-Niagara Falls, abasebenzi baseLa Salle basebenzisa indlela yokubeka indawo eyenziwe ngabantu baseMerika kule ndawo ukuba baphathe impahla yabo malunga nokuwa kunye ne-Fort Conti.
I-Salle kunye noTonti bahamba ngomkhumbi kwiLe Griffon ukuya eLake Erie naseLake Huron ukuya eMichelmackinac (kufuphi ne-Straits of Mackinac eMichigan namhlanje) ngaphambi kokufika eGreen Bay, eWisconsin. I-Salle yaqhubeka ihlala ngaphesheya kweLake Michigan. NgoJanuwari 1680, iLa Salle yakha i-Fort Miami emlonyeni weMiami River (umlambo waseSt. Joseph namhlanje eSt. Joseph, eMichigan).
La Salle kunye nabasebenzi bakhe basebenzisa i-1680 kwi-Fort Miami. NgoDisemba, balandela uMlambo waseMiami ukuya eMzantsi Bend, e-Indiana, apho ujoyina khona uMlambo iKankakee. Emva koko ba landela lo mlambo ukuya eMlambo wase-Illinois baze baqulunqa i-Fort Crevecoeur kufuphi noko namhlanje namhlanje ePeoria, e-Illinois. La Salle wabuya eTonti ephethe i-fort waza wabuyela e Fort Fortenac. Ngoxa wayesele ahambe, inqaba yabhujiswa ngamasosha ahluphayo.
Emva kokuphinda ahlangane nabasebenzi abasha abama-18 baseMelika baseMelika kunye nokuhlangana kwakhona neTonti, uLa salle waqalisa ukuhamba kwakhe eyaziwayo. Ngowe-1682, yena kunye nabasebenzi bakhe bahamba ngomkhumbi eMlambo iMississippi. Wabiza i-Mississippi Basin La Louisiane ngenhlonipho kaKumkani Louis XIV. Ngomhla ka-Apreli 9, 1682, iLa Salle wangcwatyelwa isicatshulwa kunye nesiphambano emlonyeni weMlambo iMississippi. Lo mthetho usho ngokusemthethweni iLouanaana ngeFransi.
Ngo-1683 iLa Salle yasungula i-Fort Saint Louis kwi-Starved Rock e-Illinois kwaye yashiya uThoti xa ebuyela eFransi ukuze iphinde ibuyele. Ngomnyaka we-1684, uLa salle wasuka eFransi ehamba e-Melika eya kuseMelika ukuseka i-coloni yaseFransi ekubuyeni kwakhe kwiGulf of Mexico. Le ndleko yayineenqanawa ezine kunye neekoloni ezingama-300. Ngexesha lohambo nangona kukho iiphoso zokuhamba ngeendlela kwaye enye inqanawa ithathwa ngamatye, iyesibini zinyuka, kwaye yesithathu yaqhuma eMatagorda Bay. Ngenxa yoko, bamisa i-Fort Saint Louis kufuphi neVictoria, eTexas.
Emva kokuba iFort Saint Louis isetyenziswe, uLa salle wachitha ixesha elithile elifuna uMlambo waseMississippi. Ngomlingo wesine wokufumana umlambo 36 wabalandeli bakhe bavuswa kwaye ngoMatshi 19, 1687, wabulawa nguPeter Duhaut. Emva kokufa kwakhe, i-Fort Saint Louis yahlala kuphela ngo-1688 xa amaMerika aseMerika abulala abantu abadala aseleyo baza bathabatha abathunjiweyo.
Ngomnyaka we-1995, iinqanawa zaseLa Salle ziseMatagorda Bay kwaye sele zakuba yindawo yokucwaninga kwezinto zakudala. Izixhobo ezifunyenwe kwiinqanawa ngoku zibonakaliswa kwiimyuziyam e-Texas.
Ukongezelela, uLa salle uye waba neendawo ezininzi kunye nemibutho ebizwa ngozuko lwakhe.
Okubaluleke kakhulu kwifa likaLa Salle nangona igalelo azenzileyo ekusasazeni ulwazi malunga nommandla waseLwandle Olukhulu kunye neBassissippi Basin. Ukubamba kwakhe kweLouanaana kwiFransi kubalulekile nakwindlela le ndawo yaziwa ngayo namhlanje ngokwemizi yayo yendalo kunye nezithethe zenkcubeko zabantu.
Abalinganiswa beMahabharata: Iblosari yamagama (A ukuya ku-H)
In Astrology Kuthetha ntoni ukuba i-Jupiter i-Sagittarius
Yintoni eyenzekayo Ukuba uzama ukukhupha i-Putt-ne-Miss?
Iimbali zeSpooky ze-Halloween
Izinto Ezinokuzi-4 Nge-Olympic Gymnast Ludmilla Tourischeva